Shiinahaha Oo Digniin Bixiyey “Mareykanka Waddo Qaldan Ayuu Ku Socdaa” | Xaqiiqonews
Yang Jiechi oo ah diblomaasi sare oo ka tirsan wasaaradda arimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in dalkiisa uu ilaashan doono danahiisa iyo madax banaanidiisa hadii Mareykanka uu isku dayo faragelin.
Yang Jiechi oo wada hadal xagga qadka taleefoonka la yeeshay la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan ayaa u sheegay Mareykanka in uu qaatay “tallaabooyin qaldan” oo ka dhan ah danaha iyo madax banaanida Shiinaha.
Waxa uu intaasi ku daray in Shiinaha uu qaadi doono tallaabooyinkaku haboon si uu u ilaashada masaalixdiisa isaga oo yiri “hadalkeena ficil ayaan u badali doonaa”.
Diblomaasigan Shiineyska ah waxa uu tilmaamay in qadiyadda Taywaan ay tahay mid xasaasi ah oo muhiim ah marka laga hadlaayo xiriirka laba geesoodka ah ee Shiinaha iyo Mareykanka.
Yang Jiechi ayaa carrabka ku adkeeyey in ay xaaladda ay noqon doonto “mid halis ah” hadii Mareykanka uu ku adkeysto “kaarka Taywaan” oo uu ku sii socdo wadada qaldan .
Waxa uu yiri “waxa aan Mareykanka ugu baaqeynaa in uu si fiican u fahmo mowduuca,waana in uusan Mareykanka ka gudbin mabda’a ah Hal Shiine”.